थकित सहरलाई चकित पार्ने दुई खबर – Chitwan Post
थकित सहरलाई चकित पार्ने दुई खबर
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, अशोज ११, २०७०
मसँग आज दुईवटा पुराना खबरहरु छन् । अखबारमा ६ वर्षअघि छापिएका यी दुवै खबरहरु असन्तोष र अभावले गुम्सिएर बाँचेको सहरलाई दोहो¥याएर सुनाउँदैछु । सहरबाट देखिने र बजारबाट सुनिने स–साना गाउँका यस्ता खबरहरु सुन्दा अलि अनौठा लाग्छन् । हुन त, यी खबरहरुले पार्ने छापभन्दा आफ्नै अनेक तनावको राप बोकेर छटपटाइरहेका सहरहरुमा गाउँका दुखियाहरुको खबर सुन्ने फुर्सद कसलाई पो छ र ? तैपनि, मैले कथा सम्झिएँ । सुरू गरिहाल्छु ।
२५ माघ २०६४ को दिन बिहानैदेखि धुम्म बादल लागेर पानी पर्लाझैँ भइरहेको थियो । चितवनको भरतपुर–२, क्षेत्रपुरमा कार्यालय रहेको गैरसरकारी संस्था पर्यावरणीय सेवा केन्द्रले कविलास गाविसको खोलागाउँमा आफ्ना काम देखाउन केही पत्रकारहरुलाई बोलाएको थियो, त्यसदिन । पाहुना पत्रकारहरुको टोलीमा म पनि परेको थिएँ । बिहान सबेरै जाडोले जमेका पैताला तताउँदै सर्वप्रथम केन्द्रको कार्यालयमा पुगेँ । त्यहाँ चिन्तामणि पौडेल, रमेशकुमार पौडेल, शान्ता अधिकारीलगायतका साथीहरु जम्मा भइसकेका रहेछन् । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक वसन्त रानाभाटको पथप्रदर्शनमा हाम्रो सानो टोली कविलास गाविसको जुगेडीतर्फ लाग्यो ।
जुगेडी बजारमा गाडीबाट ओर्लिएर खोलागाउँ पुग्न हामीलाई खोलैखोलाको बाटो पौने घन्टाजति लाग्यो । त्यहाँ गुरूङ गाउँ रहेछ । केही मगरहरु पनि भेटिए । अलि माथितिर चेपाङ बस्ती देखियो । पर्यावरणीय सेवा केन्द्रले त्यो गाउँका कृषकहरुलाई संगठित गरी खेतीपातीका नयाँ तौरतरिकाहरु सिकाइरहेको रहेछ । त्यसको प्रभाव राम्रै परेको देखियो । किसानहरु परम्परादेखिका रैथाने बालीनाली जोगाउन र बेसिजनका तरकारी उब्जाएर बजारमा पु¥याई आम्दानी गर्न सक्रिय थिए । संस्थाको प्रयास र उनीहरुको प्रगतिमाथि असन्तोष मान्नुपर्ने ठाउँ खासै थिएन ।
हाम्रा लागि सूचना सत्र सकिएपछि किसानहरु नाचगान गरेर रमाउनतिर लागे । हामीले पनि गीत सुनेर, नाच हेरेर उनीहरुको खुसीमा साथ दियौँ । त्यतिबेला मेरो आँखा दुई कान्लामाथि बसेर तीन केटाकेटीसँगै रमाइलो हेरिरहेका पुरूष र महिलाको हँसिलो जोडीमाथि प¥यो । उनीहरु एकै दम्पतीजस्ता देखिए । नाचगान हेरेर खुशी देखिए पनि स–साना चिचिलादेखि लाऊँलाऊँ र खाऊँखाऊँ उमेरसम्मका ती बालबच्चा पालनपोषण गर्ने बोझ उनीहरुको आँखामा झल्किएको आभास भयो मलाई । एउटा कान्लो उक्लिएर अलि नजिक गएँ र फोटो खिच्ने सुरले उनीहरुतिर क्यामेरा सोझ्याएँ । तीनवटै लालाबाला र त्यो जोडीलाई फोटोमा कैद गरेँ ।
म अर्को कान्लो पनि उक्लिएर उनीहरुनजिक पुगेँ । अनि आडैमा बसेर कुराकानी सुरू गरेँ । मैले अनुमान गरेझैँ उनीहरु एकै दम्पती रहेछन् । पतिको नाम शुकबहादुर र पत्नीको नाम लालमती चेपाङ रहेछ । बसोबास गर्ने थलो कविलास–९ को वीरेटारमा पर्दोरैछ । अनि ती बालबच्चाहरु सबै तिनीहरुकै सन्तान थिए । त्यतिमात्र होइन, त्यहाँ नआएका अरु पाँचसमेत आठ छोराछोरी जीवित रहेछन् । जन्माएका १० मध्ये दुईवटालाई चाहिँ बचाउन सकेनन् रे । मैले उनीहरुबाट जन्मिएका सबै छोराछोरीको नालीबेली खोजेँ । ४१ वर्षका शुकबहादुर र उमेर थाहा नभएको बताउने उनकी पत्नी लालमतीबाट २० वर्षयता जन्मेका १० सन्तानमा ६ छोरी र ४ छोरा रहेछन् ।
सुरूका तीन छोरीहरु मनमती, टेकमाया र विमतीको बिहे भइसकेछ । मनमती र विमतीले दुई÷दुई छोराछोरी पनि जन्माइसकेका रहेछन् । १३ वर्ष पुगेका जेठा छोरा वीरबहादुरको बिहे गरेर बुहारी भित्र्याउन उनीहरु तम्तयार थिए । माहिला छोरा तुमबहादुर नौ वर्षका रहेछन् । आठ र सात वर्षका दुई छोरीहरु निशा र उषासँगै दुई वर्षका कान्छा छोरा सुनारलाई पनि काखमा च्यापेर उनीहरु त्यहाँ रमाइलो हेर्न आएका थिए । त्यो दम्पतीले जहाँ जाँदा पनि तिनै तीन लालाबाला लिएर हिँड्ने र भेटेको आहारा खुवाएर बचाउने गरेको रहेछ । खुट्टा लागेका बाँकी बालबच्चाहरु आफ्नो खान्की आफैँ जुटाएर पेट पाल्दा रहेछन् ।
खोरियामा कोदो र मकै फलाएर वर्षमा तीन महिना ढिँडो खान पुग्ने शुकबहादुर वर्षका बाँकी नौ महिना पाए ज्यालानिमेकको कमाइबाट र नपाए वनका गिठ्ठा, भ्याकुर, त्याङ्ना र भार्लाङजस्ता कन्दमूल ख्वाएर बच्चाहरुलाई बचाउँदै आएका थिए । मैले जन्मिएर नबाँचेका दुई सन्तानबारे मनमतीसँग सोधेँ । उनले पहिलो गर्भमा पेटमै मरेकी छोरी जन्माएकी थिइन् रे । छैटौँ रोलक्रममा जन्मिएको छोरो बिरामी भएर भरतपुर अस्पताल पु¥याएपछि उपचार गर्दागर्दै मरेको रहेछ । त्यत्तिका छोराछोरी जन्माएर जीर्ण भएको उनको ज्यान थप जीवन जन्माउने तर्खरमा थियो । त्यो सुनेपछि मैले बच्चा जन्माउन रोक्ने उपायबारे थाहा भए÷नभएको जानकारी शुकबहादुरबाट लिन खोजेँ ।
जन्मान्तरको अस्थायी उपायबारे अनभिज्ञ उनी परिवार नियोजनको स्थायी बन्ध्याकरणबारे भने पूरै जानकार रहेछन् । मैंले प्रश्न गरेँ, ‘त्यति थाहा पाएपछि पनि रोक्ने उपायतिर नलागेर किन यति धेरै बच्चा जन्माउनुभो त ? उनले रातो भएको अनुहार कुहिनाले छोप्दै जवाफ फर्काए, ‘आबुई, नचिनेका मान्छेकहाँ गएर कसरी बन्द गर्नु ? लाजले मरिहाल्छु नि म ।’ शुकबहादुरको जवाफ मेरो अनुमानभन्दा अलग थियो । उनी सहरका सुकिला डाक्टरहरुको हातबाट स्थायी बन्ध्याकरण गर्न लजाएका थिए । त्यही कारण आठ–आठ सन्तानको बोझ बोकेर अभावको उकालो चढिरहन वाध्य उनीसँग कसैप्रति कुनै गुनासो थिएन ।
उनी बरू अरु आठ सन्तान थप्न तयार थिए, तर सहरमा गएर परिवार नियोजनको स्थायी बन्ध्याकरण गर्न मञ्जुर थिएनन् । मैले यो खबर सहरमा ल्याएर सुनाएको ६ वर्षयता उनको गाउँमा कसैले स्थायी बन्ध्याकरण शिविर लगेर सेवा पु¥याएको सम्झना छैन । सहर झर्ने कुरै सुन्दा लाजले भुतुक्क भएका शुकबहादुरले मरेतुल्य भएर बाँचेकी मनमतीबाट थप कति जीवन जन्माए कुन्नि ! गाउँका सहस्र शुकबहादुर र मनमतीहरु यस्ता कुरामा कसैलाई दोष दिन जान्दैनन् । आफ्नो दुःखको कारक आफैँलाई ठान्दै मनमनै भाग्यलाई धिक्कार्दाहुन् उनीहरु । यता सहरमा हामी स्वयंसेवीहरु एक्काइसौँ शताब्दीका साधनस्रोत लिएर उनीहरुको बाटो हेरिरहेका छौँ बिचरा !
शुकबहादुरलाई भेटेको दुई दिनपछि उस्तै खालको अर्को बस्तीमा जाने योजना बन्यो । २०६४ माघ २७ गतेको हाम्रो गन्तव्य थियो, पिप्ले गाविस वडा नम्बर ९ मा पर्ने धमिली गाउँ । त्यहाँ मानवअधिकार शिक्षा क्लक (रिलेक नेपाल) चितवनले मानवअधिकारसम्बन्धी एकदिने अन्तक्र्रिया कार्यक्रम राखेको रहेछ । त्यसको निम्ता पाएपछि हामी केही पत्रकारहरुले आफ्नो संस्था ‘सञ्चार सञ्जाल’को अगुवाइमा त्यहाँ पुगेर गाउँका समस्याहरु खोजबिन गरी आ–आफ्ना सञ्चारमाध्यमबाट समाचार सार्वजनिक गर्ने निधो ग¥यौँ । फलस्वरुप, हामीले सबै सञ्चारमाध्यमको सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुनेगरी पत्रकार साथीहरुलाई निम्ता ग¥यौँ र सानो समूह बनाएर धमिली गाउँको यात्रा तय ग¥यौँ ।
त्यसदिनको टोलीमा मानव–अधिकारकर्मी एवम् पत्रकार मुकुन्द दहाल, चितवन पोष्टका समाचारहरुमा त्यसबेला सबैभन्दा बढी छाउने पत्रकार शोभा अधिकारी, भण्डाराबाट स्थानीय सञ्चार–माध्यमहरुलाई समाचार टिपाउने स्वयंसेवी पत्रकार शर्मिला धरेल, सञ्चार सञ्जाल परिवारका साथीहरु सूर्यप्रकाश कँडेल, रमेशकुमार पौडेल, हरिप्रसाद पोख्रेल, राधेश्याम खतिवडा, शान्ता अधिकारीलगायतका थियौँ । पत्रकार शर्मिला धरेलले रिलेक नेपाल चितवन शाखाका साथीहरुको पनि नेतृत्व गरेकी थिइन् ।
पिप्ले गाविसको गड्यौलीबाट कस्सिएर डेढ घन्टा उक्लिएपछि हामी धमिली पुग्यौँ । बाटोमा पानी परेपछि हल्का रूझियो । जाडोले लुगलुग काम्दै गयौँ । धमिली गाउँ पुगेर एउटा प्राथमिक विद्यालयमा आश्रय लियौँ । हाम्रो गन्तव्य त्यही थियो । स्कुलवरपर छरिएर बसेका चेपाङ समुदायको ८०–९० वटा घरहरु रहेछन् ।
बिहानको खाना नखाई गाउँमा उक्लिएको हाम्रो टोलीले त्यही गाउँको मकै, जुनेलो, तरूल र पिँडालु किनेर भोजनको व्यवस्था मिलाएको थियो । गाउँलेहरुले हामी नपुग्दै तरूल र पिँडालु पोलेर राखिदिएका थिए । मकै र जुनेलोचाहिँ हामीले बजारबाट लगेको माटाको हाँडी पुगेपछि मात्र भुट्ने काम भयो । सिंगो गाउँमा हाँडी नभएको थाहा पाएर त्यसदिनको खाँचो टार्न लगिएका दुईवटा हाँडी हामीले फर्कने बेलामा गाउँलाई नै उपहार दिएका थियौँ । धमिलीका बासिन्दाहरुले पालो गरीगरी त्यो हिउँदमा केही घान मकै र जुनेलो भुटेर हाँडीको उपयोग गरे होलान् । चेपाङ भाषामा पिँडालुलाई ‘गु’, तरूललाई ‘गोही’ र जुनेलोलाई ‘कोकोरो’ भनिँदोरहेछ । खाने बेलामा नाम सोधेर हाँस्दै र एकअर्कालाई हँसाउँदै खूब रमाइलो गरियो । खाना र खुसीको त्यति मीठो संयोग जीवनमा जहिलेसुकै मिल्ने चीज होइन ।
भोजनपछि त्यहाँका बासिन्दाले भोगिरहेका मानवीय संकट र २०५२ देखि ०६३ सालसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमाथि स्थानीय बासिन्दाहरुसँग अन्तक्र्रिया गरियो । मानवअधिकारकर्मी मित्र मुकुन्द दहालले मानवअधिकारका आधारभूत मान्यताहरुबारे सरल शैलीमा प्रशिक्षण दिए । औपचारिक कार्यक्रम सकियो । खुला दिमागले गाउँका समस्याहरु खोज्ने बेला भयो । त्यसबेला मैले अलि माथि पखेरामा हलगोरू नारेर बाँझो सुर्का जोतिरहेका एक जना दाजुलाई देखेँ । तुरून्तै त्यहाँ पुगेँ पनि । जोतिरहेका कृषक दाइसँग अनौ मागेर चार सियोजति जोतिहेरेँ । नयाँ मान्छेले जोत्दा गोरू बटारिएर हैरान ! मेरो रहर पूरा भो । अरु साथीहरु पनि गएका थिए । सबै जना स्कुलमा फर्कियौँ ।
त्यसपछि हामी लाग्यौँ– रोग, भोक र शोकमा बाँचेका धमिलीवासीको जनजीवन खोतल्न । उनीहरुको उज्यालो अनुहारभित्र त्यो ठाउँको नामले बुझाउने अर्थजस्तै संघर्षका धमिला धब्बाहरु देखिए । टोलीमा गएका सबै पत्रकारहरु आ–आफ्नो रूचि र रोजाइअनुसारका सूचना संकलन गर्न स्वतन्त्र थिए । सबैले त्यसै गरियो पनि । समाचार संकलनको सिलसिला चल्दैथियो । स्कुलको आँगनमा दुई बच्चा लिएर घाम तापिरहेकी एउटी आमाको अनुहारमा मेरो आँखा प¥यो । उनलाई देख्दा मैंले दुई दिनअघि कविलासको खोलागाउँमा भेटिएकी १० सन्तान जन्माउने आमा मनमतीलाई सम्झिएँ । कतै उस्तै कथा पो छ कि भनेर कुराकानी थालेँ । अरु साथीहरुले पनि मलाई साथ दिए ।
३५ वर्षकी ती महिलाको नाम सानीमाया चेपाङ थियो । उनले पनि आठ सन्तान जन्माइसकेकी रहिछन् । तीमध्ये एक छोरा जन्मँदै मरेको थियो । बाँकी ६ छोरा र एक छोरी जीवितै रहेछन् । हामीले ती सन्तति जन्मँदाका कथा कोट्यायौँ । सानीमायाले सहजै जवाफ दिइन्, ‘दुई भाइ छोरा वनमा गएर पाएँ, अरुको पालोमा व्यथाले च्यापेर वन जान भ्याइनँ, ६ वटा चैँ घरमै जन्मिए ।’ हामी स्तब्ध भयौँ । आजभोलि सहरका मात्र नभई गाउँका पनि धेरै महिला सुत्केरी हुनुअघि नै सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा जान्छन् । भरसक सिपालु स्वास्थ्यकर्मी वा मातृशिशु कार्यकर्ताको सहयोगमा सुरक्षित तवरले बच्चा जन्माउँछन् । सानीमाया भने सकेसम्म वनमा जान्छु, नत्र घरमै बच्चा जन्मिन्छ भन्दै थिइन् । अस्पतालसँग त उनको आइनोसाइनो नै थिएन ।
हामी सोध्दै गयौँ, उनी भन्दै गइन् । बच्चा पाउने व्यथा लागेपछि दिसापिसाब गर्न गएझैँ झाडीतिर दगुरेको अनुभव उनीसँग थियो । दिसापिसाब गर्नु र बच्चा जन्माउनु एकै हो भन्ने उनको बुझाइ थियो । हाम्रो थप जिज्ञासा थियो, ‘बच्चा पाउने व्यथा लागेको थाहा पाएपछि घरमा नबसेर किन वनतिर जान मन लागेको ?’ उनले जवाफ दिइन्, ‘घरमा त मान्छेले देख्छन्, लाज लाग्छ पो ।’ सानीमायाले काखको बच्चालाई दूध चुसाउँदै जोखिम जीवनका भूतकालीन भोगाइहरु सुनाइरहिन् । दुई छोरा जन्मने बेलामा सुत्केरी व्यथा लागेपछि उनी जङ्गलतिर दगुरेकी रहिछन् । बच्चा जन्मिएपछि वनबाटै बूढालाई चिच्याएर चिसो पानी र खुर्पा मगाई त्यही खुर्पाले नाल काटेर पानीले पखाली घर ल्याइन् रे !
आङै सिरिङ्ग हुने कथा सानीमायाले साँझबिहान धन्दा गर्दाका स्वाभाविक संस्मरणझैँ सुनाएकी थिइन् । काखमा खेलिरहेको कान्छो छोरो इसाकलाई पनि तीन महिनाअघि त्यसरी नै वनमा जन्माएर घर ल्याएको कहानी उनले हामीलाई सुनाइन् । जङ्गलमै जन्मिएको अर्को छोरो राजकुमार भने पाँच वर्ष पुगिसकेका थिए । जेठो छोरो जमानलालको २० वर्ष पुगेपछि बिहे गरेर बुहारीसमेत भित्र्याइसकेकी सानीमायालाई घरमा पाएका र जङ्गलमा जन्माएका सन्तानबीच कुनै फरक लाग्दोरहेनछ । ‘वनमै जन्मिएका बढी बाठा छन्’– दुःख मनाउ गर्नुको सट्टा मुसुमुसु हाँस्दै उनले थपिन् । हामीले उनका श्रीमान् सोमबहादुरलाई भेट्न खोज्यौँ, तर सकेनौँ । उनी त्यहाँ आएका थिएनन् र घरमा पनि रहेनछन् ।
सानीमायाको कथा गाउँकै साझा व्यथा रहेछ । हामी सबै जना मन कहालिने सूचना लिएर सहर फर्कियौँ र समाचार लेख्यौँ । जिल्लाको सदरमुकाम भरतपुरदेखि देशको राजधानी काठमाडौँसम्म हल्लीखल्ली मच्चियो । अखबारहरुका पाना सानीमायाको समाचार र तस्वीरले रङ्गिए । रेडियोहरुमा उनका कारूणिक कथा गुञ्जिए । त्यसयताका ६ वटा हिउँदबर्खाहरु बित्दा लजालु शुकबहादुरहरुले सहर झर्ने सडक चिने कि चिनेनन् र प्रसव सानीमायाहरुले वन पस्ने बाटो बिर्सिए कि बिर्सिएनन्, कुन्नि !
निगमको मनोमानी रोक
भाग्य चम्काउने बम्पर